Tsy lavitra an'i Orenburg, akaikin'ny sisintanin'i Kazakhstan, ny tanànan'i Sol-Iletsk. Ny faritr'ala dia fantatra amin'ny farihy sira sy fotaka miparitaka. Rosiana maro no te hisafidy ny fialam-boly amin'ny tombotsoan'ny " Ranomasina Maty ". Ao amin'ny toeram-ponenan'ny balneolojika fanta-daza, tonga ny olona izay mila mitondra aretina avy amin'ny taolana, ny rafi-pitondran-tena, ny rafi-pitaterana ny neurolojia na ny mahazo tsaratsara kokoa. Fa ankoatra ny fikarakarana ny fahasalamanao manokana, afaka manana fotoana tsara ianao eto, hitsidika ny tanànan'i Sol-Iletsk. Izy ireo no hodinihina.
Ity tanàna kely ity dia voahodidin'ny vondron-tafio-drivotra avy any amin'ireo farihy fito misy faritra hektara 53 hektara. Tsara kokoa ny manomboka mahita olombe avy any amin'ny tanàn-dehibe goavambe, izay ahitana ny fifantohana sira amin'ny faritin'ny Ranomasina Mainty (24-25 g / l). Ny farihy sy renirano indrindra dia Razval . Io farihy salan-tsira ao Sol-Iletska io dia manana siramamy sira na avo kokoa noho ny ao amin'ny Ranomasina Maty - 320 g / l. Izany no antony mahatonga ny fahatsapana ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny fandroana.
Tsy dia misy salohim- bary ireo farihy mangatsiaka sy bronine Dunino - 150 g / l. Ny dobo Tuzluchnoe dia manintona ireo mpizahatany miaraka amin'ny fotaka misy azy.
Raha ny marina, ny farihy mineraly dia heverina ho tanàna kely, izay ahitana sira 2.6 g / l, ankoatra ny sira, misy mineraly ao anatin'ilay fitambaran-drano akaikin'ny ranon'ny ranomasina Caspienne .
Museum "Cossack Kuren" ao Sol-Iletsk
Ny toerana mahaliana an'i Sol-Iletska dia ahitana ny tranom-bakoka "Cossack Kuren", izay 25 km miala ny tanàna eo amoron'ny reniranon'i Kurala. Ity trano ity dia trano fialan-tsasatra tany Cossack, natao tamin'ny taonjato XIX-XX. Ao an-trano sy trano mifanila dia azo atao ny mahafantatra ny fiainana sy ny fomban'ny Cossacks, ny fomba fitantanany toekarena, fitaovana amin'ny asa sy ny fitaovana fampiasana. Ankoatra ny fanaraha-maso, nasaina ny mpiangaly mozika hihaino ny fampisehoana ny hiran'i Cossack, mitaingina soavaly, trondro ary mandray anjara amin'ny fombafomba.
Tendrombohitra be tendrombohitra ao Sol-Iletsk
Ao amin'ny lisitr'ireo zavatra hita ao Sol-Iletsk dia tokony hampidirina ny lalana mankany amin'ireo tendrombohitra Cromace Pokrovsky. Io tranga voajanahary io no manimba ny hatsaran'ny loko mamirapiratra - fotsy, mavo ary manga. Ny tsangambato nentim-paharazana, natsangana taorian'ny fanjanahana ny Ranomasina fahiny tao amin'ilay antsoina hoe kretacea (eo ho eo amin'ny 70-66 tapitrisa taona lasa izay), dia misy tsangantsoratra voasoratra. Ny Amonita amin'ny moloks fahiny dia azo jerena ao amin'ny fizarana misy ny fizarana kalky. Ny zavamaniry eo an-toerana ao amin'ny vondron-kelefy, izay mitombo eo amin'ny lakaly - Ny lakandrano mena, Kermek Cretaceous, Nanophyton ary ny hafa - dia mijery ihany koa mahagaga.
Fiangonan'i Kazan, Ikonan'ny Reny any Sol-Iletsk
Ny Fiangonan'i Kazan Ikonan'ny Renin'Andriamanitra dia naorina tamin'ny taona 1902 noho ny fanomezana avy amin'ireo mponina ao an-toerana sy ny fikambanan'ny olona ao amin'ny fomba nentim-paharazana Rosiana-Byzance. Fantatra fa tamin'ny fananganana fahefana Sovietika dia tsy niasa hatramin'ny 1946 ny fiangonana.
Afaka mitsidika ny trano fiangonan'i St. Catherine ny Maritiora lehibe koa ianao tamin'ny taona 1842, naorina teo amin'ny toerana nisy ny fiangonana voalohany.
Mitrotro sira ao Sol-Iletsk
Fialantsasatra tsy mahazatra no miandry anareo any amin'ny toeram-pitrandrahana sira ao an-tanàna. Tsy misy tsiambaratelo fa ny fanorenana dia natsangana tamin'ny fotoana nananganana ny toeram-pitrandrahana sira eto. Ny mahaliana manokana ho an'ireo vahiny ao an-tanàna dia ny fitsidihana ny toeram-pitrandrahana sira amin'ny 300 m ambanin'ny haavony amin'ny haavo 30 metatra.
Etsy andanin'izany, any amin'ny faritr'i Sol-Iletsk, faritr'i Orenburg, dia fomba iray miavaka amin'ny fitsaboana bronchopulmonary sy aretin'ny angôvaly no ampiasaina: ny marary dia ampidirina ao amin'ny toeram-pitrandrahana arintany - misy speleocamera miaraka amin'ny mikroklima mahazatra. Etsy ankilan'izay, amin'ny halaliny dia hatsaran'ny siramamy siramamy mahafinaritra ao amin'ny Barbara Lehibe Maritiora.
Araka ny hitanao dia misy ny atidoha vitsivitsy ao an-tanàna, saingy tsy manan-tsahala izy ireo. Ankoatra ireo toerana mahaliana ao Sol-Iletsk, dia manasa anay hitsidika ilay valan-javaboary antsoina hoe Persiyanov PA, izay ahitana ankizy, moskea, sary sokitra "Black Dolphin" , tsangambato ho an'ireo mpanorina an'i Rychkov sy Uglitsky ary mazava ho azy fa ny tranom-bakoka no hampihomehy azy.
Ny firenena mahantra indrindra eto an-tany
Sarin'ny Sherlock Holmes any Londres
Visa ho any Finland miankina
Visa ho any Mongolia ho an'ny Rosiana
Ohatrinona ny vola entina mankany Goa?
National Gallery any Londres
Sehatry ny Georgia
Ny akanjo lava lava vita amin'ny vehivavy
Bannik - iza io amin'ny angano slavy?
30 haingon-tsiram-bavaka miavaka
Mitondra vovobony amin'ny tànana manokana
Quercetin - inona no ahitana ny tena?
Ny fomba nataon'i René Gilles
Ahoana no hiainana aorian'ny fisaraham-panambadiana?
Ny mahasoa ny ayrana amin'ny vatantsika - fampiasana amin'ny aretina isan-karazany
Ahoana ny fisafidianana akanjo fampakaram-bady ho endrika?
Hypnosis ho an'ny fahavoazana
Mipoitra ny alika
Sary tsara tarehy amin'ny akanjo
Fanomezana tsy mahazatra ho an'ny tovovavy iray
Nahoana no nofy ny rojo volamena?